Ngwa 5 na egwuregwu iji nwee anụrị na Sọnde a | Gam akporosis
Jose Alfocea | | Ngwa gam akporo, Egwuregwu gam akporo
Ee ndi enyi. Sunday abịawo na ya àkwà mmiri toro ogologo gafere na ọtụtụ n'ime gị ga-enwe ọ theụ n'ụzọ kachasị amasị gị, n'ụlọ na-ekpori ndụ mega marathon nke usoro kachasị amasị gị, na-amapụ site na nnọkọ oriri na ọ partyụ everyụ kwa abalị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị hụghị ụbọchị, na ebe ezumike mara mma ma ọ bụ jiri oge. iji soro ezinụlọ nọrọ. Echi ga-amalite izu ọhụrụ mana chee na ị ka nwere ụbọchị ahụ dum iji zuru ike ma nwee anụrị.
Site Gam akporosis anyị chọrọ inye gị aka maka nke a ka anyị wetara gị otu nhọrọ nke egwuregwu na ngwa na, ma eleghị anya, ị maghị, kama na ị ga-enwe mmasị dị ukwuu. Download ndị kasị masị gị, ma ọ bụ ihe niile ozugbo; Wụnye ha na gị gam akporo ama ma ọ bụ mbadamba, na-enwe ezigbo oge animated na-enweghị na-eche na akwa na-abịa na njedebe. Ka anyị gaa ebe ahụ!
1 Ọgụ ndị agha
2 Bọọlụ - mmefu ego na mmefu ego
3 Egwu Style
Anyị na-amalite dị ka o kwesịrị maka ụbọchị dịka taa, ya na egwuregwu. Aha ya bụ "Combat Squad" na ọ bụ FPS (Onye mbụ gbara egbe) egwuregwu dị ọhụụ dịka ọ dịla na Google Play Store maka gam akporo maka ọnwa ole na ole. Ọ bụ n'ezie egwuregwu dị oke egwu, yana usoro eji arụ ọrụ nke egwuregwu Fps; rutere na dị iche iche ọtụtụ ụdịdị gụnyere otu na otu, ise na ise, na na ruo a ngụkọta nke asaa dị iche iche egwuregwu ụdịdị.
Na "Combat Squad" kwụpụta ya emeghieme Engine 4 ndịna-emeputa na ya onyinye nke elu kenkwucha keakamere ọgụgụ isi. Ọ bụrụ na-amasị gị Fps egwuregwu, ị ga-n'ezie na-amasị onye a kwa, ọ bụ ezie na ọ bụ nnọọ ihe kasị mma.
Bọọlụ - mmefu ego na mmefu ego
Anyị na-ahapụ egwuregwu ndị ahụ dọwara, maka oge ahụ, ma gaa «Ball», ngwa ahụ ga - enyere gị aka ijikwa ego na akụnụba gị. Ọ bụ nnọọ nke nkiti na nke di nfe Site na nke ị nwere ike idekọ ụgwọ ọnwa gị, mmefu na mmefu ego iji chọpụta ihe omume mmefu gị, mụta ihe ị na-emefu ego, ihe ị nwere ike belata na ya, ma mụta otu esi echekwa. Ọ na-akwado ọtụtụ ego dị iche iche, na-akwado ọtụtụ mmefu ego, yana atụmatụ igwe ojii na-emekọrịta.
Ngwa ahụ bụ n'efu maka ndị chọrọ ihe dị mfe ma dị mfe. N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ inwetakwu nhọrọ ndị ọzọ, ị ga-enweta ụdị zuru ezu.
"Style Music" bụ a music ngwa na-na-dịtụ-adịbeghị anya na Play Store na-akpali. Kedu ngwa egwu Nke ahụ bụ, ọ nwere ọrụ ọ bụla nke ọkpụkpọ egwu ọ bụla, gụnyere echiche folda, onye na-ekiri ihe nkiri ọdịnala ọdịnala, wdg. Mana ọ na-enyekwa atụmatụ ndị ọzọ dịka ndakọrịta Chromecast, nkwado 24-bit FLAC, na ndị ọzọ. Akụkụ kachasị adọrọ mmasị n’egwuregwu “Style Music” bụ na ọ nwere ike ibunye ihe karịrị ụlọ ọrụ redio puku iri ise gbasaa n’ụwa niile. Ya mere, ọ na-abụrụ dị ka onye nke kasị mma ngwa ike nke jikọọ na-ege ntị na redio na-ege ntị songs si gị n'ọbá akwụkwọ.
Na-enyekwa ihe ozi omenka, Abụ egwu o nwere nkwado maka Musixmatch, ọnọdụ abalị na ndị ọzọ
Anyị ga-akwụsịkwa nhọpụta a dị mkpirikpi nke ngwa na egwuregwu iji kwalite njedebe nke akwa a n'otu ụzọ ahụ anyị si malite, ya na egwuregwu. Na nke a ọ bụ «Cavefall», a adịghị agwụ agwụ ụdị ọsọ ma ọ bụ enweghi ngwụcha onye ọsọ nke mere ka ya mpụta mbụ na Play Store nnọọ nso nso. Nnukwu ihe dị iche na egwuregwu a bụ na onye ọhụụ ga-agba ọsọ n'ahịrị, kama kama ọ na-ada infinfinite kwupụta na ala nke ọgba. Ebumnobi ga-abụ nweta ihe, zere ihe mgbochi n'ụzọ ma gbuo ndị ọjọọ, na-ejide ogologo oge o kwere omume na ikuku. Ọ nwere ọtụtụ ọkwa, gụnyere ọkwa zoro ezo, nsogbu kwa ụbọchị, ebumnuche, na ndị isi. Ọ bụ egwuregwu freemium, yabụ ị ga-ahụ ihe ịzụrụ na ngwa.
Developer: Ụlọ ọrụ AB
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 5 na egwuregwu iji nwee anụrị na Sọnde a